CAJIIB: Alex Oxlade-Chamberlain oo ka jawaabay xiddiga Liverpool ugu timaha badan & Kan inta ugu badan Muraayadda isku eega! - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Ciyaaryahanka kooxda Liverpool ee Alex Oxlade-Chamberlain ayaa xilli ay isaga iyo qaar ka mid ah xiddigaha ay isku kooxda yihiin xayeysiis u sameynayeen Nivea Men waxaa la weydiiyo su’aalo yaab leh isaguna waa uu ka jawaabay.
Xiddigii hore ee kooxda Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain oo ay dhinac taagnaayeen James Milner iyo Joe Gomez markii ay xayeysiiska sameynayeen ayaa la weydiiyey bal inuu aragtidiisa ka dhiibti xiddiga ugu timaha badan kooxda Reds iyo midka mar waliba muraayadda aan ka hortagin ee isku fiiriya.
Oxlade-Chamberlain ayaa dadka ka qosliyey markii uu Mohamed Salah ku sheegay inuu yahay midka ugu timaha badan kooxda, isla markaana waxa uu xusay inuu meel waliba timo ku leeyahay xitaa caloosha!.
“Hubaashii Mohamed Salah aad ayuu u timo badan yahay, jirka oo dhan ayuu timo ku leeyahay xitaa Caloosha!.” ayuu ku jawaabay Alex Oxlade-Chamberlain, mar la weydiiyey bal inuu sheego xiddiga ugu timaha badan kooxda.
Sidoo kale 24-sano jirkaan ayaa ka dhawaajiyey in xiddiga xulka qaranka Brazil ee weerarka uga dheela kooxda Reds Roberto Firmimo uu yahay xiddiga kooxda ee inta ugu badan Muraayadda isku eega.